အက်ဆစ် (ဂီတအဖွဲ့) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဟိန်းဇော် (၂၀၀၀–၂၀၀၆ ကွယ်လွန်ချိန်ထိ)
အက်ဆစ် ( အင်္ဂလိပ်: ACID ) သည် မြန်မာ ဟစ်ဟော့အဖွဲ့ တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်မာ၏ ပထမဆုံး ဟစ်ဟော့တေးစီးရီးဟု သတ်မှတ်ကြသည့် စတင်ခြင်း ကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့သည်။
၂ အဖွဲ့ဝင်များ ဆုံးရှုံးခြင်း
၁၉၉၀ နှောင်းပိုင်းကာလများသည် ပြန်ဆိုတေးနှင့် မြန်မာသံစဉ်များ မင်းမူနေသည့် ကာလဖြစ်ရာ ဂီတအမျိုးအစားသစ်ကို ပရိသတ်ကြား ပျံ့နှံ့ရန် ဦးစွာအားထုတ်ခြင်းမပြုဘဲ တေးစီးရီးအဖြစ် တိုက်ရိုက်ထွက်ရှိလာခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုသာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ဂီတလောကသားများက ခန့်မှန်းကြသည်။ သို့သော်လည်း စထွက်ချိန်မှ ၂ လအကြာအထိ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာရင်းတွင် ထိပ်ဆုံးမှ နေရာယူခဲ့သည်။ 
၂၀၀၆ ခုတွင် ဟိန်းဇော် (၁၉၈၁ ဇွန် ၁၂ - ၂၀၀၆ ဧပြီ ၁၀) ကွယ်လွန်သည်။
ဒီမိုကရေစီ အကြိုလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဇေယျာသော် (၁၉၈၁ မတ် ၂၆ မွေး) ကို ၂၀၀၈ ခု၊ မတ်လ ၁၂ ရက်တွင် အစိုးရက ထိန်းသိမ်းလိုက်သည်။  နိုဝင်ဘာ၌ အမိန့်ချမှတ်ရာ တရားမဝင်အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းသည့် ပုဒ်မဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၅) နှစ် ချမှတ်ခံရသည်။  ဖမ်းဆီးချိန်တွင် ထိုင်းဘတ်ငွေ၊ မလေးရှားရင်းဂစ်နှင့် စင်္ကာပူဒေါ်လာများ လက်ဝယ်ရှိသဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေ တရားမဝင်ကိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထပ်တိုးထောင်ဒဏ်များ ထပ်ဆောင်းကာ ကော့သောင်းထောင်သို့ ပို့သည်။ ၂၀၁၁ ခု၊ မေလ ၁၇ ရက် ရောက်မှသာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကြောင့် ထွက်လာနိုင်ခဲ့သည်။ 
၂၀၀၈ ခု၊ ဧပြီလမှာ ရန်ရန်ချမ်း (၁၉၇၉ ဒီဇင်ဘာ ၅ မွေး) အလှည့် ဖြစ်သည်။  ရန်ရန်ချမ်းအား စွဲဆိုသည့်ပြစ်မှုမှာ မူးယစ်ဆေးကိစ္စနှင့် ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ခန့် ထိန်းသိမ်းပြီးနောက် ၂၀၀၉ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်တွင် လွတ်မြောက်လာသည်။ 
အနဂ္ဂ (Smoke Acid)
ဟိန်းဇော် (Acidic Acid) (၂၀၀၀ - ၂၀၀၆ ကွယ်လွန်)
ရန်ရန်ချမ်း (Black Acid)
ဇေယျာသော် (Nitric Acid) (၂၀၀၀ - ၂၀၁၁)
စတင်ခြင်း ၂၀၀၀ မျိုးကျော့မြိုင်
↑ Alex Elgee. "Another Birthday behind Bars". Irrawaddy. 26 Mar 2010.
↑ "AAPP Case No. 0062". Assistance Association of Political Prisoners. Mar 2008.
↑ "5 Generation Wave Activists Stentenced Archived 19 January 2011 at the Wayback Machine.". Mizzima News. 20 Nov 2008.
↑ "ပြည်သူ့နာကျင်ခံစားမှုကို အနုပညာဖန်တီးချင်တယ် Archived3October 2011 at the Wayback Machine."။ မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန။ ၂၀၁၁၊ ဇူလိုင် ၂၉။
↑ မင်းလွင်. "Popular Burmese Rap Performer Arrested Archived5June 2011 at the Wayback Machine.". The Irrawady. 18 Apr 2008.
↑ သန်းထိုက်ဦး. "Detained Hip Hop Singer Yan Yan Chan Released Archived 11 January 2009 at the Wayback Machine.". Mizzima News.7Jan 2009.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အက်ဆစ်_(ဂီတအဖွဲ့)&oldid=674102" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၂၁:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။